12 Biby miavaka hita any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Biby miavaka hita any Eropa
Fotoana famakiana: 8 minitra
(Last Nohavaozina: 28/03/2021)
maro loko, vahiny, ary miavaka amin'ny endrika sy toerana onenana, ho hitanao ireo 12 biby ny biby miavaka indrindra mahita any Eropa. monina ny ranomasina lalina, Alpes avo indrindra, na miala sasatra amin'ny ala maintso eropeana, aza hadino ny mijery an'ireny biby dia ireny rehefa hitsoaka manaraka ianao any Eropa.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
1. Biby miavaka hita any Eropa: European Lynx
Fonenana Soisa, Frantsa, Italia, sy ny Repoblika Tseky, ny Lynx eoropeana dia wildcat tsy manam-paharoa. Manana rambony fohy ny Lynx, volom-borona volontsôkôla misy tasy, mora be ny mahita azy any anaty ala mando.
Hahita saka mahavariana saka saka an-trano ity saka saka ity, ary ny cheetah misy pentina.
Aiza no ahitako ny Lynx eoropeanina any Eropa?
The Bavarian Forest dia toerana mahatalanjona mahita an'i Lynxes sy ny zanany.
Dusseldorf mankany Munich Miaraka amin'ny lamasinina
Dresden mankany Munich Miaraka lamasinina
Nuremberg mankany Munich Miaraka lamasinina
Bonn mankany Munich Miaraka lamasinina
2. Biby miavaka hita any Eropa: Puffin
Azonao atao ny mahita ireo zavaboary tsara indrindra ireo manomboka amin'ny tapaky ny volana aprily amin'ny hantsana amoron-dranomasina. Ohatra, Skomer Island any Western Wales dia toerana mahafinaritra ho an'ny sary dia sy ny sary Puffin. Ankoatry ny, ny morontsirak'i Brittany dia toerana mahatalanjona iray hafa mahafinaritra ny voron-dranomasina Atlantika.
Manatratra hatramin'ny 30 cm ny halavany ary 20 cm ny hahavony. Ary, misy vavam-boasary sy faribolana eo amin'ny masony, ho hitanao fa mora be izy ireo mahita ireo voron-dranomasina mahafinaritra eny amin'ny hantsana amoron-dranomasina. miaraka 90% amin'ny mponina manerantany eraky ny Eropa, azonao atao ny mankafy ny zanatany manontolo amin'ny morontsirak'i Eropa mandritra ny taona.
Aiza no ahitako puffins any Eropa?
Ny morontsirak'i Brittany any Frantsa sy ny Nosy Skomer dia toerana mety ahitanao an'i Puffin.
Amsterdam mankany Paris miaraka amina lamasinina
Rotterdam mankany Paris miaraka amina lamasinina
Bruxelles mankany Paris miaraka amin'ny lamasinina
3. Biby miavaka hita any Eropa: Saiga
Ny Saiga dia antilopa miavaka, indrisy, tandindomin-doza izao. Ny Saiga dia iray amin'ireo 12 ny ankamaroan'ny biby tsy manam-paharoa hitanao any Eropa. Miaraka amin'ny orona tsy mahazatra, ity biby tsy manam-paharoa ity dia afaka mifanaraka mora foana amin'ny toetrandro mangatsiaka sy mafana, satria ny endrika orona no manatanteraka an'io tanjona io.
Ary noho izany, ny Saiga dia tsy manana trano raikitra ary afaka mifindra monina 1000 km eo anelanelan'ny fahavaratra sy ny ririnina. Ary, afaka mandeha kilometatra am-polony isan'andro izy ary mavitrika mandritra ny andro. Ny zava-misy mahaliana momba ny Saiga dia ankoatry ny zavamaniry sy ahitra, mihinana zavamaniry misy poizina amin'ny biby hafa izy.
Aiza no ahitako ny Saiga any Eropa?
Azonao atao ny mahita ny Saiga any amin'ireo tendrombohitra sy ala mahafinaritra any Carpathian.
4. Biby miavaka hita any Eropa: The Pine Marten
Raha sendra mandeha mitsangatsangana amin'ireo ala sy ala any Eropa ianao dia mety hahita ilay Pine Marten tokana. Mipetraka ao an-davaky ny hazo i Pine Martens ary mpihanika tsara tokoa, ka aza hadino ny mijery raha te hahita ity zavaboary manokana ity ianao.
Ny Pine Martens dia miloko volontsôkôlà, misy bib mavo maivana eo amin'ny tendany. Noho izany na dia any anaty ala aza, ho sarotra ny tsy mahita an'ity biby mahavariana ity eo amin'ny sampan'ny hazo, miaraka amin'io bib mavo io.
Aiza no ahitako ireo pine martens?
Ny havoana any Ekosy sy Irlandy, no toerana tsara indrindra hahitana an'i Pine Marten.
5. Biby miavaka hita any Eropa: Kaderona Maitso Eoropeana
amin'ny 40 cm ny habeny, ho tena sarotra ny tsy mahita ny androngo maitso eropeana. Ity androngo tsy manam-paharoa ity dia manana lamosina maitso mamiratra sy kibo mavo. Mahaliana, mandritra ny vanim-potoana fampakaram-bady, ny lahy miova loko ho manga mamirapiratra.
Ny Green Lizard dia miaina amin'ny haavon'ny 2000 metatra, toy izany, raha mitsangatsangana any an-tendrombohitra Austrian ianao, aza hadino ny mijery ny manodidina. Raha mandeha amin'ny fararano ka hatramin'ny ririnina ianao, dia ho hitanao ao anaty lava-bato sy toerana miafina ireo androngo ireo. Na izany aza, amin'ny fahavaratra, manomboka ny volana martsa, ireo hatsaran-tarehy ireo dia hanafana ny masoandro.
Aiza no ahitako ilay Kadiki-maintso?
Azonao atao ny mahita io androngo maintso io mipetraka amin'ny masoandro eny ambonin'ny vatolampy, manerana an'i Eropa, Aotrisy, Alemaina, hatrany Romania sy Torkia.
6. Biby miavaka hita any Eropa: Pink Flamingo
Ny flamingo mavokely tsara tarehy dia monina ao amin'ny iray amin'ireo fitehirizam-bokin'ny bibidia tsara indrindra any Eoropa. Ireo flamingo mavokely dia miaina miaraka amina soavaly dia any amin'ny Camargue Reserve any Frantsa. Ny flamingo mavokely dia lasa tandindon'ny Camargue, amin'ny loko mavokely mamiratra.
Ao amin'ny lagoons, marshland, na manidina, mampiseho ny hatsaran-tarehin'izy ireo, ny flamingo mavokely dia fahitana mahatalanjona tokoa. Rehefa mamakivaky ny 4 lalan'ny Camargue, ho takatrao haingana hoe maninona ity vorona ity no iray amin'ireo 12 biby tsy manam-paharoa indrindra hita any Eropa.
Aiza no ahitako ilay Pink Flamingo ao amin'ny Reserve Camargue?
Ny Camargue dia tahiry voajanahary lehibe any Frantsa. Mba hahitana an'ity vorona tokana ity, mankamin'ny Valan-javaboary ornitholojika.
Lyon mankany Toulouse miaraka amina lamasinina
Paris mankany Toulouse miaraka amina lamasinina
Tsara toulouse miaraka amina lamasinina
Bordeaux mankany Toulouse miaraka amina lamasinina
7. Trozona any Irlandy
Raha sendra mandeha sambo any atsimon'i Irlandy ianao, any amin'ny toerana lavitra, lohan'olom-borona mety hipoitra avy any anaty rano. Mety ity ilay trozona Humpback, ilay trozona mahafinaritra sy lehibe mipetraka any amin'ny ranomasina manodidina an'i Irlandy.
Na eo aza ny habeny manaitra sy mampatahotra, 12-16 metatra, tsy manimba sy malemy fanahy izy ireo. Tonga amin'ny faramparan'ny fararano ireto trozona tsara tarehy ireto, mihira ny hirany sarotra, maharitra eo anelanelan'ny 10-20 minitra.
Aiza no ahitako ilay trozona Humpback?
Scotland, Irlandy, Angletera dia tsara amin'ny fijerena trozona.
8. Biby miavaka hita any Eropa: amboadia
Mahavariana sy mampatahotra, amboadia dia iray amin'ireo biby tandindomin-doza any Eropa. Ireo biby tsy manam-paharoa ireo dia mizatra mora foana amin'ny toerana onenana rehetra, amin'ny lokon'ny camouflage, ary lehibe ny habeny. Betsaka ny karazana amboadia, fa ny amboadia antonony afaka mahatratra hatramin'ny 70 kg.
Mipetraka any anaty ala ny amboadia, anaty fonosana, ary heverina ho biby voaaro fatratra any Eropa. Misy ny foibe fitahirizana sy ny tahiry hiarovana ny amboadia ary hanome azy ireo ny fepetra tsara indrindra mba tsy ho lany tamingana tanteraka izy ireo.
Aiza no ahitako ny amboadia any Eropa?
Faritra Liguria any Italia, ny ala Bavarian, ary Polonina dia amboadia’ toerana onenana tiany.
9. Biby miavaka hita any Eropa: feso
Miparitaka sy mihira any amin'ny rano amorontsirak'i Italia, ireo feso tsara tarehy dia fahitana mahafinaritra. Na dia efa nahita feso aza angamba ny tsirairay tamin'ny sary, valan-drano, na zoo any Eropa, tsy misy mampitaha ny mandeha sambo sy mankafy ireo zavaboary mahafinaritra ireo.
Ny fotoana tsara indrindra hahitana feso feso dia amin'ny fahavaratra rehefa mafana kokoa, ary afaka mandeha mitsangatsangana ianao.
Aiza no ahitako feso feso any Italia?
The morontsiraka tsara an'i Cinque Terre ary ny ranomasina Ligurian no toerana mety hahitana trondro feso any Italia.
La Spezia mankany Riomaggiore miaraka amina lamasinina
Florence mankany Riomaggiore miaraka amina lamasinina
Modena mankany Riomaggiore miaraka amina lamasinina
Livorno mankany Riomaggiore miaraka amina lamasinina
10. Shark Basking
Rehefa mandre ny ankamaroan'ny olona “antsantsa” ny fihetsika voajanahary indrindra dia ny fihenjanana sy tahotra. Na izany aza, ilay Basking Shark mahery dia mety ho goavana sy mampatahotra ny habeny, fa io antsantsa io dia tsy mihinana afa-tsy plankton.
Ary noho izany, afaka mahatsapa ho voaro tanteraka ianao manodidina ireo 12 feo sy 12 metatra trondro. Ny Basking Shark no antsantsa faharoa lehibe indrindra any Angletera, ary ny tsara indrindra hita avy eny amin'ny hantsana amin'ny fahavaratra. Noho izany, raha mahita vodin-telozoro sy volondavenona lehibe ianao, avy eo manofasofa ary manaova fakan-tsary ho an'ny snap Basking Shark.
Aiza no ahitako ny Basking Sharks Inn The UK?
eny amoron'i Cornwell, ny Nosy Lehilahy, ary ny ankamaroan'ny Andrefan'i Angletera dia amoron-tsiraka, ianao dia afaka mahita antsantsa milomano ao amin'ny fonenany voajanahary.
11. Biby miavaka hita any Eropa: Wolverine
mikorontana, mikorontana, no anaram-bosotra wolverine amin'ny latina, nadika tamin'ny Gluten. Io anarana tsy mahazatra io dia mifanentana amin'ny mpikambana lehibe indrindra ao amin'ny fianakavian'i Mustelidae – tonga lafatra satria manana filana lehibe tsy mahazatra izy ireo.
Izany no antony, ny amboadia dia mety mandeha lavitra mitady sakafo, ary izao dia hita manerana an'i Eropa.
Aiza no ahitako vovoka?
amin'ny ankapobeny, ny mponina wolverine dia mifantoka any Russia, ny Taiga, sy Azia. Ary, afaka mahita wolverines ao koa ianao ny valan-javaboary any amin'ny havoana any UK.
12. Biby miavaka hita any Eropa: Alpine Ibex
Avo amin'ny 4000 metatra, eo anelanelan'ny tampon-tendrombohitra feno lanezy, mankamin'ny hantsam-bato, ho hitanao ny Alpine Ibex. Miaraka amin'ny tandroka afaka mitombo hatramin'ny 140 cm, ity osy an-tendrombohitra ity dia iray amin'ireo biby manaitra sy mampiavaka an'i Eropa.
Voalohany, monina any amin'ny Alpes Eoropeana, ny Alpine Ibex, Tsy dia mora jerena raha ampitahaina amin'ny Basking Shark sy androngo maitso. afa-tsy, ny kitron'izy ireo dia manamora ny fiakaran'ny Ibex sy handositra ireo biby mpihaza any amin'ny Alpes be vato.
Aiza no ahitako ilay Alpine Ibex?
Ny Alpes italianina ary Nanketo Alpes eto Soisa manana vitsivitsy fomba fijery mahatalanjona ho an'ny bibidia sy ny fijerena Alpine Ibex.
Zurich mankany Wengen miaraka amin'ny lamasinina
Geneva mankany Wengen miaraka amin'ny lamasinina
Bern mankany Wengen miaraka amin'ny lamasinina
Basel mankany Wengen miaraka amin'ny lamasinina
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy amin'ny famolavolana fitsangatsanganana any amin'ireo toerana tsara indrindra hijerena ny bibidia. Ny fitsangatsanganana an-dàlambe manerana an'i Eoropa dia mety amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny toeram-ponenana voajanahary amin'ireo biby tsy manam-paharoa any Eropa ireo.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Biby 12 tsy manam-paharoa fahita any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / en mba / en na / de kokoa fiteny.
#biby amazingwildlifeholidaysworldwide AnimalsInEurope MostUniqueAnimalsInEurope Biby tsy manam-paharoa
Eoropa mahatsapa ny Sakafo tsara indrindra Places
Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Alemana, Travel Europe